Qabiilka Varemba (Zimbabwe) , 18 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Yu Xunkang Wiilkiisa Naafada Ah Wuxuu Maalin Walba Xambaar Iyo Rafaad Ku Geeya Schoolka.
Nin Shiine ah oo la yiraahdo Yu Xukang ayaa maalin walba lugeeya 18 mayl oo u dhiganta 29 km, si uu wiilkiisa oo 12 jir ah isla markaana naafa ah u geeyo iskuulka. Ninkan aabaha ah oo ay kala tageen xaaskii u dhashay wiilka naafada ah ayaa sheegay inuu waayey iskuul kale oo ka dhow oo wiilkiisa wax bara. Ninkan 40 jirka ah iyo wiilkiisa oo la yiraahdo Xiao Qiang ayaa ku nool magaalada Fengyi oo 2000 mayl galbeed ka xigta magaalada Shanghai.
Waxaan toosaa subixii 5am, waxaana diyaariyaa quraacda iyo qadada wiilkayga, Iskuulka aan geeyo wiilkayga wuxuu ii jiraa 4.5 mayl, marka aan geeyo waa inaan soo noqdaa si aan u shaqeeyo, galabtii ayaan ku noqdaa oo soo qaadaa ayuu yiri ninkan wiilkiisa la dedaalaya.Wuxuu kaloo sheegay Ilaa intii iskuulka la furey bishii September inuu lugeeyey 1600 mayl oo u dhiganta 2560 km.
Wiilkayga gacmaha, lugaha iyo dhabarka ayuu naafo ka yahay, laakiin maskaxdiisa iyo hadalkiisuba waa caafimaad qabaan, waxaana ku faraxsanahay inuu imtixaan kasta galo kaalinta koowaad gaar ahaan xisaabta iyo sayniska ayuu yiri Yu Xikang oo ku faraxsan inuu wiilkiisu waxbarashada ku wanaagsan yahay.Wuxuu kaloo intaa ku daray in aanu wiilkiisu raaci karin baaskiilka isla markaana wadadu tahay buuro aan baaskiil lagu wadi karin.
Markii uu soo baxay warka ku saabsan ninkan iyo wiilkiisa, ayaa dowlada Shiinuhu balan qaaday inay guri uga kireyn doonto iskuulka agtiisa, wiilka naafada ahna cunto iyo hoy laga siin doono iskuulka si aabaha ay ugu suura gasho inuu si xor ah u shaqaysto. Mr.Yu Xikang ayaa sheegay inuu wax walba u hurayo sidii wiilkiisu wax u baran lahaa.
Shiekh Adam Makda Aljacfari
1961 ayaa nin Baayacmushtar Muslim ah gaadhigiisii kula cadilmay baadiyaha Zimbabwi (Rhodesia ayaa berigaa la oran jirey). Wuxuu Ninkaasi isa soo taagey tuulada kraal, halkaas oo uu kula kulmay Qabiilka Varemba ee qarniyada badan muslimka ahaa, iyagoo aan weligood xitaa maqal kelmedaha Muslim iyo Islaam!!!